Wisconsin တက္ကသိုလ်မှသတင်းစာ (The Racquet) သည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏မှားယွင်းသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအားတင်ထားသည်။ တက္ကသိုလ်မှဖယ်ရှားလိုက်သောအပိုဒ် (၂၀၁၀ မတ်လ၊ မတ်လ) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသဘာ ၀
Wisconsin တက္ကသိုလ်မှသတင်းစာ (The Racquet) သည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏မှားယွင်းသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာကိုတင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်မှဖယ်ရှားလိုက်သောအပိုဒ် (၂၀၁၀ မတ်လ၊ မတ်လ)
ဤစာမျက်နှာကို Wisconsin ပြည်နယ်-ဟော်ကျောင်းသားသတင်းစာတက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးစိုးရိမ်: အဆိုပါဘောလုံးရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်။ ဒါကမတ်လ, 17th 2019-piece အ hit, စုံစမ်းသတင်းစာပညာအဖြစ်ဖြင့် Information သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပစ်မှတ်ထား။ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်, အကျုံးတစ် baseless ဧပြီလ 25 featured ထားတဲ့ဂယ်ရီ Wilson က, အကြောင်းအပိုင်းပါရှိသော, 2018 Los Angeles မြို့ကရဲအစီရင်ခံစာနီးပါးတစ်နှစ်အစောပိုင်းကတင်သွင်းနှင့်မှထောက်ပံ့ အဆိုပါဘောလုံးရိုက်, by နီကိုးလ် Prause.
၏ထုတ်ဝေအောက်ပါကာလ၌ရှိ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် hit-piece အ, Wilson ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုပထမဆုံးတစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါး၏ဖယ်ရှားရေးနောက်တွင်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ခံ, အအတုအယောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအစီရင်ခံစာအပေါ်အသေးစိတ်နှင့် Wilson နဲ့အကြားကအီးမေးလ်ဖလှယ်မှုများကို အဆိုပါဘောလုံးရိုက် နှင့် University Wisconsin ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ။ သက်ဆိုင်ရာလင့်များ:
မတ်လ ၁၇ ရက်ဆောင်းပါးအတွက်မူရင်း URL၊အဆိုပါရက်ကက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: မူးယစ်ဆေးအသစ်တိုက်ဖျက်ရေး " - https://web.archive.org/web/20190326190532/https://theracquet.org/5838/showcase/the-racquet-investigates-fight-the-new-drug/
အထက်ပါဆောင်းပါး (ကိုလည်းစက္ကူ၏အယ်ဒီတာများနေသော) ၏နှစ်ခုစာရေးဆရာများ: Karley Betzler နှင့် Samantha Stroozas
အဆိုပါ The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖေဖော်ဝါရီလ 7th Samantha Stroozas ဆောင်းပါး
Stroozas ၏ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်ဆောင်းပါးအပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ၏တွစ်တာတုံ့ပြန်မှု - https://twitter.com/YourBrainOnPorn/status/1093585735381176320.
Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF
နောက်ခံသမိုင်း #1: 2013 နီကိုးလ် Prause ထပ်တလဲလဲသူမသည် LAPD နဲ့ UCLAPD မှဂယ်ရီ Wilson ကဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းတရားကိုဟောပြောခဲ့ပါသည်ကတည်းက
ဤအသရေဖျက်မှုပြောဆိုချက်ကို Prause ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများအားအနှောင့်အယှက်ပေးသောစာမျက်နှာ ၂ ခုရှိအပိုင်းများစွာတွင်ဖော်ပြထားသည်။စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5။ ) ။ အထူးသဖြင့်ဤအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Los Angeles မြို့ရဲဌာနနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့ Prause ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြုပါ။
ရေတိုဗားရှင်း: မတ်လ 6th, 2013 ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွင် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်။ " ကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်အဖြစ်၎င်း၏ oh-ဒါ-မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လွဲမှားစေသောဖြစ်ပါသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်သို့သော်လည်း, က Ley နှင့် Prause ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထားပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ley နှင့် Prause သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ထင်ရှားကြောင်းထိုကဲ့သို့အလျင်ရှိကြ၏5လအတွင်း ရှေ့မှာ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်.
ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်း 2013 Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုမှာ (သံမဏိ et al ။, 2013) နောက်ဆုံးတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဖွငျ့ဤ Prause အင်တာဗျူးအပါအဝင်စာနယ်ဇင်းလွှမ်းခြုံတစ်ခုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂါ: လိင်စွဲလမ်း "၏နယူးဦးနှောက်လေ့လာရန်မေးခွန်းများသက်တော်။ " ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Wilson ကသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သံမဏိ et al ။, 2013 နှင့် Prause ရဲ့သံသယရှိတောင်းဆိုမှုများအထက်ပါအင်တာဗျူးအတွက်န့ ်. နှင့်အခြားနေရာများတွင်။
Wilson ကမိမိအပျေါ posted စိတ်ပညာယနေ့တွင် အဖြစ်ဘလော့ဂ် အဘယ်အရာကိုမျှ SPAN Lab ကယ့်နယူး Porn လေ့လာမှုခုနှစ်တွင်အဘယ်အရာကိုမျှနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ စကားမစပ်, စိတ်ပညာယနေ့တွင်Prause ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ပုံအရနောက်ဆုံးတွင် Wilson ၏ဤလေ့လာမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုသာမက၊ လေ့လာမှု၏အားနည်းချက်များကိုလည်းရေးသားခဲ့သောနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှစ် ဦး ၏ဝေဖန်မှုများကိုမထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါ။ Prause ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်သတင်းမီဒီယာများမှထောက်ခံမှုမရှိသောပြောဆိုမှုများသည်နောက်ဆုံးတွင်အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့် 8 သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ အားလုံး 8 စာတမ်းများ Wilson ကရဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့သဘောတူ သံမဏိ et al ။ ပွဲတစ်ပွဲအတွက်ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်နှင့် Prause စာနယ်ဇင်းမှသူမ၏တွေ့ရှိချက်အတုဖြစ်သည်။
အစပိုင်း၌ ဇူလိုင်လ, 2013 ပြီးနောက် (ကရက်အနည်းငယ် Wilson က Prause ရဲ့ပထမဦးဆုံး EEG လေ့လာမှုမိမိသတိထားဝေဖန်မှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေWilson ၏နာမည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ မှတ်ချက်များသည်အကြောင်းအရာနှင့်လေသံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ Wilson သည်သူမအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတင်ခဲ့သည်၊ Wilson ကဆင်းရဲသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားစွပ်စွဲသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် နှင့် UCLA ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့။ " ဤတူညီသောမှားယွင်းသောအခိုင်အမာပြောဆိုမှုများသည် Prause နှင့်သူမ၏ sockpuppets တို့၏ tweets နှင့် comments များတွင်ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ (Prause စာမျက်နှာ၏ကဏ္ several အတော်များများတွင် screenshots များစွာကိုဖော်ပြထားသည် - ဥပမာ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10။ ) ထိုသို့သောအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများမည်သူမျှဖွငျ့နေကြသည်။
စအဦး၌ Prause အပေါ် post မှအတု username များများစွာအလုပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးတွေအောက်မှာ။ Prause မရှိသလောက်သူမ၏အမည်ရင်းသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကိုရွေးတော်မပြီးနောက်သမျှသောပြောင်းလဲသွားတယ်။ မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause နောက်ဆုံးတော့သူမ purportedly သည့် LAPD နှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြောင်းကို "လူတစ်ဦး" အဖြစ်ဂယ်ရီ Wilson ကခွဲခြားသတ်မှတ်လာတယ်။ 2018 မှာတော့သူမသညျကား, သူမ၏အရပ်ရှည်ရှည်-ပုံပြင်အလှဆင် Wilson ကနှစ်ကြိမ် FBI ကအစီရင်ခံခဲ့။
အဖြစ်မှန်လား။ Prause ၏အနှောင့်အယှက်ပြုမှုစတင်ခဲ့ပြီး ၆ နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး Wilson အားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနမှမည်သည့်အခါကမျှဆက်သွယ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ Wilson ကရှည်လျားသော Prause, တကယ်တော့, (နောက်ပိုင်းတွင်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြရာ) လိမ်လည်မှု, အခြေအမြစ်မရှိအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းယူဆပေမယ့်သူက Prause လဲလျောင်း - ထွက်လာတယ်။ In နှောင်းပိုင်းတွင် 2017 လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲဌာနနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲဖုန်းခေါ်တဲ့ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်သူတို့ရဲ့စနစ်တွေမအစီရင်ခံစာ, မတစ်ဦးနီကိုးလ် Prause အားဖြင့်တရားစွဲဆိုမည်သည့်အစီရင်ခံစာထင်ရှား.
ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန (မည်သူမဆိုပေမယ့်သူတို့ကိုဖိုင်များကိုသူ) တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်စာဖြင့်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ပေးပါဘူးနေစဉ်, အက်ဖ်ဘီအိုင်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာကိုအစဉ်အဆက်ပြောချင်အပေါ်တရားစွဲဆိုခဲ့: နှောင်းပိုင်းတွင် 2018 ခုနှစ်, Wilson က Prause လဲလျောင်းခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည် FBI ကနှင့် FBI ကနှင့်အတူပြန်ကြားရေးတောင်းဆိုမှုကို၏တစ်ဦးလွတ်မြောက်ရေးတင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ FOIA တောင်းဆိုမှုကိုနှင့်မုသာကိုသုံးသောအဖြစ် Prause ဖော်ထုတ်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများအဘို့ဤအပိုင်းကိုကြည့်ပါ: နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား။
သူမ၏၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Full-service ကိုလိုလားသူ porn မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, Prause သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောပြစ်မှုများနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများအကြောင်းပြောဆိုသူတိုင်းကိုလူသိရှင်ကြားစွပ်စွဲခဲ့သည် - အားလုံးရည်မှန်းချက်သက်သေအထောက်အထားများထဲမှ iota မပါဘဲ။ ထို့ကြောင့်သူသည်အခြားသူများကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရဲများနှင့် FBI သို့သတင်းပို့ရန်အကြိမ်ကြိမ်လိမ်ခဲ့သည်။ (Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF).
ဥပမာအားဖြင့်, Prause အဆုံးသတ် သူမ၏ရေဖျက်မှုတွစ်တာသွန် ကြောင်း tweeting အားဖြင့် Nofap နှင့်အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ဆန့်ကျင် သူမကို FBI မှ Rhodes ကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည် ဖြစ်ခြင်းများအတွက် (ကြည့်ရှုပါ "cyberstalker ။ ": အောက်တိုဘာလ, 2018: သူမ FBI ကဖို့ "အမှတ်စဉ် misogynist" အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ကဖော်ပြခဲ့သည်မူကြောင်းကို Prause tweets) ။ Rhodes, Wilson ကတူ, အက်ဖ်ဘီအိုင်မှတစ်ဦး FOIA တောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ က Wilson ကပြု, အက်ဖ်ဘီအိုင် Prause Prause ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတဘက်မိမိခုခံကာကွယ်ဘို့အလက်ဇန်းဒါး Rhodes (တခုတခုအပေါ်မှာ FBI ကအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်နှင့် သင်္ကာမလြှော့, အသရေဖျက်မှု) ။ စာရွက်စာတမ်းများမြင်ဘို့: ဒီဇင်ဘာလ 2018: FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု.
UPDATE # 1: Prause သည်ယခုအခါအသရေဖျက်မှုတရားရုံး ၃ ခုတွင်ပါဝင်သည်။ Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. et al ။ နီကိုးလ် Prause., San Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ Texas ခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၅ - ၁၉-CV-5-OLG; အလက်ဇန်းဒါး Rhodes v ။ နီကိုးလ် Prause, et al., Pennsylvania ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၂ - ၁၉-cv-2 နှင့် အာရုန်အမ် Minc, Esq v ။ Melissa အေလယ်သမားနှင့်နီကိုးလ် R. Prause, ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ: Cuyahoga ကောင်တီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် CV-20-937026
UPDATE # 2: Prause သည် Gary Wilson ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ တရားဝင်ဖိအားကြောင့်သူမရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ကီထိုင်စွန့်ခွာစေ၏ လြှောကျလှာ "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်" ဟုအဆိုပါအမှတ်အဘို့နှင့် "YourBrainOnPorn.com ။ "
update # 3: (သြဂုတ်လ, 2020): Serial အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်သူ Nicole Pause သည် Gary Wilson အားတရားစွဲဆိုမှုများရှုံးသည်။ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များကပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ပါ။ 2020 ၏သြဂုတ်လ၌ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်.
UPDATE # 4: အဆိုပါ www.RealYourBrainOnPorn.com URL ရှိနေပြီ YBOP မှခွင့်ပြုခဲ့ပါသည် နှင့်အတူသိသာပူးပေါင်းအတွက်၎င်း၏ယခင်ပိုင်ရှင် (များ) အပြီး နီကိုးလ် R. ချီးမွမ်းYBOP ကိုဖျက်သိမ်းရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် URL ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
UPDATE #5(၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ) - Prause သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်အသရေဖျက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဒုတိယတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ 2020 ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု လူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမတော်မတရားသတင်းပို့ခံရပြီးနောက်သူမအားထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများအားနှုတ်ပိတ်ရန်အမှန်တကယ်တရားစွဲဆိုမှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု နှင့်သူမ၏မလိုတမာသောအပြုအမူသို့မဟုတ်သူမအပေါ်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့်အသရေဖျက်မှု ၃ ခုတွင်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသူ
နောက်ခံသမိုင်း #2: အဆိုပါ The New မူးယစ်ဆေး (FTND) Fight တိုက်ခိုက်ခြင်းဖေဖော်ဝါရီလ 7th Samantha Stroozas ဆောင်းပါး
ယင်းမှတုန့်ပြန် CRU ၏ Wisconsin ပြည်နယ်-La Cross ရဲ့အခနျးကွီး (ခရစျတျောအဘို့အကျောင်းပရဝုဏ် Crusade ကို) hosting တက္ကသိုလ် သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်, Samantha Strooza သူမ၏ပထမဦးဆုံး FTND hit-piece အထုတ်ဝေ: ရှုထောင့်: သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်, သင်အတိအကျအဘယ်အရာကိုတိုက်ခိုက်နေကြသလဲ Stroozas သည် FTND အားရှုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ယုတ္တိတန်သောအမှားအယွင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့တိုင်သူမအနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသော“ ထင်မြင်ချက်များ” ကိုထောက်ခံရန်ရွယ်တူချင်းသုံးသပ်သည့်စာတမ်းတစ်စောင်ကို ကိုးကား၍ မရခဲ့ပါ။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါမှာသူမ၏“ ကျွမ်းကျင်သူ” သည် FTND သည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်သုတေသနအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိဟုလိမ်ညာပြောဆိုသောပညာရှင်မဟုတ်သောဒေးဗစ်လေလေဖြစ်သည်။ (Stroozas သည် David Ley ကိုစစ်ဆေးရန်အချက်ကိုမရွေးချယ်ခဲ့ပါ။ ) အခြားသိပ္ပံနည်းကျ“ အရင်းအမြစ်” မှာa500-စကားလုံးဆားအိုင် Tribune, Op-Ed နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒီတုန့်ပြန်နေဖြင့် debunked ခဲ့သောလေး disaffected Mormonism ကုသ, by: Op-Ed: Utah ကျောင်းသားများကိုအစစ်အမှန်လိင် ed နဲ့ 'အသစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်' (2016) လိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုမှချန်လှပ်, porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘောလုံးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်ပညာ၏ရယ်စရာအခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ နီကိုးလ် Prause-မွေးထုတ်စကားပြောအမှတ်, neuroscience သူမ၏အဝိဇ္ဇာဖျောထုတျပေးသော, ဒီအထောက်အထား-based ဆောင်းပါးအတွက်ချေပသည်: ဒွန်ဟီလ်တန်, MD အားဖြင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2017) အကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း.
Stroozas ၏ဘက်လိုက်မှု၊ အမှန်အားဖြင့်မှားယွင်းသောဝါဒဖြန့်ချိမှုကြောင့်စိတ်ပျက်သွားပြီး Wilson ကစေ့စပ်ခဲ့သည် အဆိုပါဘောလုံးရိုက် on ဒီတွစ်တာချည်, အတော်ကြာ tweets ဆောင်းပါးထဲမှာန့ ်. တောင်းဆိုမှုများတိမ်လေ့လာမှုများနှင့်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များရာပေါင်းများစွာမှချိတ်ဆက်အတူ။ Stroozas သုံး Non-ထိရောက်သော tweets နှင့်အတူတုံ့ပြန်နှင့် Wilson က replied:
လွှမ်းမိုးသောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, ကျောင်းသားအယ်ဒီတာများ Karley Betzler နှင့်မခင်မာ Stroozas Twitter ပေါ်တွင် Wilson ကပိတ်ဆို့။ Betzler နှင့် Stroozas တို့သည်နောက်ပိုင်းတွင်မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်“ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး” ဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့ပြီး Wilson အားဆန့်ကျင်သောလက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ၃ - မတ်လ ၁၇ ရက် Betzler & Stroozas The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆောင်းပါးနီကိုးလ် Prause ကလိမ်လည်လှည်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါရှိသည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Karley Betzler နှင့် Samantha Stroozas ဆောင်းပါး (“အဆိုပါဘောလုံးရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: သစ်မူးယစ်ဆေး "Fight) တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများတစ်ခုလုံးကိုဆောင်းပါးပယ်ဖျက်ဖို့, ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Wilson ကမဆိုဖော်ပြထားခြင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ပထမဦးဆုံးကျောင်းသားအယ်ဒီတာများအတင်းအကျပ်နှင့်နိုင်အောင်ကွာဟခဲ့သည်။
Stroozas ၏ပထမဆုံး hit-piece ကဲ့သို့ပင်မတ်လ ၁၇ ရက်ဆောင်းပါးသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရည်ညွှန်းချက်များသို့မဟုတ်ပညာရှင်များထံမှထုတ်ပြန်ချက်များကိုကင်းမဲ့ခဲ့သည်။ Wilson & Fight the the New မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်အသရေဖျက်ရန်အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်ပုံမှန်ပူးပေါင်းစုဆောင်းသောပညာရှင်သုံး ဦး ပါ ၀ င်သည်။ နီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Leyနှင့် ဒံယလေသ Burgess။ ဤဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများသည်သက်သေပြနိုင်သောအသရေဖျက်မှုနှင့် FTND နှင့် Wilson တို့၏ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့် Prause, Ley နှင့် Burgess တို့၏ဥပမာများကိုဖော်ပြထားသည်။
Prause & Ley ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဂယ်ရီ Wilson အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လတွင်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
ဒံယလေသ Burgess (မတ်လ, 2018) ကမထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်
ဒါကြောင့် Betzler & Stroozas hit-piece ဟာ Prause / Ley / Burgess တွစ်တာတွေနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကနေကောက်နုတ်ဖော်ပြတာတွေနဲ့အတူတကွစုစည်းထားတာထက်မပိုပါဘူး။ ဒီ 2015 Daily Beast ဆောင်းပါး နောက်ထပ် "ဟောင်း Mormonism ။ " ဖွငျ့ သင်္ကေတအားလုံးက Betzler နှင့် Stroozas တို့သည် Prause / Ley / Burgess မည်သည့်ပရိဘောဂကိုမဆိုပေးအပ်သည့်အရာများကိုပြန်လည်ထူထောင်စေသည်။
Betzler & Stroozas ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် အခြေအမြစ်မရှိရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ နီကိုးလ် Prause ပေး
Wilson ၏ဖေဖော်ဝါရီလတွစ်တာအတွက်ဝေဖန်မှုများတွင် Betzler & Stroozas သည် Wilson အကြောင်းရေးသားထားသောအပိုင်းတစ်ခုကို ၂၀၁၈ Aprilပြီ ၂၅ ရက် (ဥပမာ၊ တစ်နှစ်အစောပိုင်းက) တွင် Los Angeles ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှတင်ပြပြီးအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဘောလုံးရိုက်, နီကိုးလ် Prause အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ (အပိုင်းနှင့်ရဲအစီရင်ခံစာ၏ဖန်သားပြင်ပုံ။ )
Wilson က၏အသရေဖျက်မှုများအတွက်ဆီကအယ်ဒီတာအဖွဲ့မျှတမှု Prause ထံသို့စေလွှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အီးမေးလ်ကခဲ့ UWL ၏ Cru အခန်း။ Prause ကသူတို့ကိုပြောတယ်။တစ်ဦးတင်ဆက်မှုများအတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မြှင့်တင်ရန်။"ဝီလ်ဆင်ကိုစိတ်ပျက်စေမည့်အပြုအမူ၊ကိုယ့် floored ခဲ့သည်“) FTND တွင်ဂယ်ရီ Wilson ကလည်ပတ်သော www.yourbrainonporn.com နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ Prause က Cru ကိုပြောလိုက်သည်။FTND သိပ္ပံပညာရှင်များနောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမြှင့်တင်နေပါတယ်။ လိုပဲတဲ့ဟာသမဟုတ်ပါ။ "
တကယ်တော့ဒါဟာဟာသ, မကောင်းတဲ့ဟာသဖြစ်ပါတယ်။ Prause အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲဒီမှာသားကောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤရွေ့ကားကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများ (1, 2, 3, 4, 5) စာရွက်စာတမ်း Prause ရှုတ်ချနှင့် The New ကိုမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အပါအဝင် Wilson ကနှင့်အခြားသောနှောင့်ယှက်ထားပါတယ်ဘယ်မှာဖြစ်စဉ်များရာပေါင်းများစွာ, သုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် UCLA မှာသူမ၏အကျဉ်းစစ်မှုထမ်းတစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအနေဖြင့် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်း, ထိုပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း.
Prause ကသူမ၏မှားယွင်းသောပြောဆိုချက်များအတွက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုပေးခဲ့သလား။ Nope ။ Betzler သို့မဟုတ် Stroozas တို့သည် Wilson သို့မဟုတ် FTND အား Prause ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသလား။ Nope ။ Betzler နှင့် Stroozas တို့သည်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရန်ပင်နှောင့်နှေးခဲ့သလား။ ထိပ်ဆုံး3အနေဖြင့်တော့မဟုတ်ပါ Google ကပြန် “ Gary Wilson Nicole Prause” သည် Wilson နှင့်အခြားသူများအား (FTND အပါအ ၀ င်) အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာ (၄) မျက်နှာမှ (၃) ခုဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ်လစ်နှစ် ဦး သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှောင့်ယှက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
Prause ၏အခြေအမြစ်မရှိသောရဲတပ်ဖွဲ့၏အစီရင်ခံချက်တွင်“ နောက်ယောင်ခံခြင်း” အပါအ ၀ င်မည်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုမျှမကြားရပါ
ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း Prause သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍“ရဲအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ပြီး"ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်။ သို့သော်ရဲများက Wilson အားမည်သည့်အခါကမျှ ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ 2017 အတွက်ကိုပဌနာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲသူတို့ရဲ့စနစ်တွေမထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာဖော်ပြခဲ့တယ်။ Prause တစ်ဦးရောဂါဗေဒမုသာကိုသုံးသောနှင့်မိစ္ဆာရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
YBOP ၏လှည့်စားမှုကိုဖော်ထုတ်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှာလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နီးပါးက Prause သည်သူမ၏ထူးဆန်းသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကို,ပြီ ၂၅၊ ၂၀၁၈ တွင်တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Betzler & Stroozas သည်သူတို့၏မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်စာမျက်နှာတစ်ခုတင်ခဲ့သည်အထိ Wilson သည်အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းကိုမသိခဲ့ပါ။ အဝါရောင်စာနယ်ဇင်းပညာ၏သာဓကတစ်ခုတွင် Betzler & Stroozas က၎င်းသည် 'ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause အားဖြင့်တင်သွင်းနောက်ယောင်ခံအစီရင်ခံစာ။ " Wilson ကသူမကိုလှည့်စားပြီးလော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကို Prause ကဘယ်တုန်းကမှမဖော်ပြခဲ့ဘူး။ ၎င်းကို“ cyberstalking report” ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသော်လည်း“ သံသယရှိသောလုပ်ရပ်များ” ကဏ္sectionတွင်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်သလိုရာဇ ၀ တ်မှုလည်းမဟုတ်သည့်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ စွပ်စွဲခံထားရသော“ ရာဇ ၀ တ်မှု” နှစ်ခု၏မျက်နှာပြင်ပုံ
အဘယ်အရာကို Prause အဖြစ်မှန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စွပ်စွဲ:
သံသယရှိသူသည်သားကောင်နာမည်နှင့် pic ကိုသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ခဲ့သည်။ သံသယရှိသူဓာတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ "
YBOP တွင် Prause ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာနှင့်သူမ၏အမည်များကိုရိုက်ကူးထားသော်၎င်းသည်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သူမ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်မှုကိုရာဇ ၀ တ်မှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံများပါသည့်စာမျက်နှာများ (1, 2, 3, 4, 5) သူမ၏အမှားများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အသရေဖျက်မှု၊ အဖြစ် ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်, Prause အားဖြင့်သူမ၏အထင်ကရအပြုအမူကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်3မတရားမှုနှင့်မအောင်မြင်သော DMCA ဖြည့်စွက်ခြင်း သူမ၏ incriminating tweets ၏ screenshots များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။
မသိစေခြင်းငှါသောသူတို့အဘို့, DMCA အတိုကောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ။ တစ်ဦးက DMCA ယူ-Down အသိပေးစာ website တစ်ခုကနေဖယ်ရှားပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ရှိသည်ဟုအသုံးပြုသည်။ Prause တစ် DMCA ယူ-Down သူမ၏နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်မီးလောင် chronicling ဒီစာမျက်နှာရှိသည်ဖို့တစ်သွင်းပြီးလမ်းအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့သည်။ Prause သူမ၏အသေရေဖျက် tweets များ၏ screenshots များပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်နေပါတယ်။ tweets ယေဘုယျအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရယူနိုင်ပါသည်မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြှနျမမရှိကြပေ။
သံသယရှိသူသည်ဂျာမနီသို့ သွားရောက်၍ သားကောင်များ၏ကွန်ဖရင့်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သံသယရှိသူကိုဖိတ်ကြားမခံခဲ့ရပါဘူး။ "
အပြင်ညီလာခံတက်ရောက်ခြင်းတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေ Prause လဲလျောင်းနေသည်။
Wilson ကဂျာမနီမှခရီးထွက်ခြင်းနှင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်မှန်ဒါဟာင် အပြုအမူစွဲအပေါ် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံAprilပြီလ ၂၃ မှ ၂၅ ရက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သော (Prause သည်သူမ၏ရဲစခန်းကိုreportပြီ ၂၅ ရက်တွင်တင်ခဲ့သည်) မှားယွင်းသောအယူအဆမှာဂျာမနီရှိ ICBA ညီလာခံကိုတက်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုသည် ICBA ကွန်ဖရင့်တွင်တစ်ခါမျှတက်ရောက်ခြင်း (သို့) တင်ပြခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမယုံကြည်ပါ။ သူမ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးတွင် Prause ၌ရှိသည် စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ် အမူအကျင့်စွဲများ၏ concept ကိုဆန့်ကျင်, အထူးသဖြင့်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ။ သူမသည် "စွဲ - ငြင်းပယ်ပါတယ်။ "
ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်တာကာလအတွင်း Prause သည် ICD-4 beta မူကြမ်း၏မှတ်ချက်များကဏ္inတွင်စွဲစွဲမြဲမြဲတင်ခြင်းအတွက်ဤဥပမာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာမရှိပါ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအပိုင်း (CSBD) - ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်သင့်လျော်သောရောဂါအသစ်။ Prause ကမှတ်ချက် ၄၀ ခန့်၊ အခြားသူအားလုံးထက်ပိုသောမှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည်၊ CSBD ၏ရောဂါလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးလက်စွဲသို့မရောက်စေရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အသုံးပြုသူအမည်ကိုမဖန်တီးလျှင်မှတ်ချက်များကိုသင်မဖတ်နိုင်) ။ သူမ၏ကြိုးပမ်းမှုမှာအောင်မြင်ခဲ့သည်။compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder "အခု ICD-11 အတွက်ပါဝင်ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.
အပေါ် Moving, အ Prause ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ဒုတိယအပိုင်းt သည်တူညီသောအချက်အလက်များနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၊
Prause က Wilson အား LA ၌တွေ့မြင်ခဲ့သည်ဟုတစ်ခါမျှမပြောဆိုခဲ့သော်လည်းသူသည်သူ၏“ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထူးခြားမှု” ကို“ အဖြစ်အပျက်” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။အိပ်ပျော်နေသောအိတ်ဝတ်ထား"နှင့်တစ် ဦး အဖြစ်ရွေးချယ်မှုသည်သူ၏လက်နက်ရှည်လျားသော sleave (လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ) ဆွယ်တာအင်္ကျီ။ " SNL skit လိုအသံ။ ရဲအရာရှိကသူမနှုတ်ခမ်းကိုက်နေသည်ဟုထင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Gary Wilson ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ Los Angeles မှာ (သို့) အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ထဲမှာမရှိခဲ့ဘူး။
သူ၏ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည့်အပြင် Prause ၏ Wilson အကြောင်းဖော်ပြချက်တွင်သူသည်အသက် ၆၅ နှစ်မပြည့်သေးသော ၅'၆″ မပေါင် ၁၂၀ တိကျသောမတိကျမှုများစွာရှိသည်။
Betzler & Stroozas သည် Prause ၏အတုအယောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတွင်စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သူတို့ကဖြည့်ဆည်းရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
2019 နိုဝင်ဘာလမှာ Diana Davison ဖြစ်လာတယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Prause ရဲ့သားကောင် - hood ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ပထမဆုံးဂျာနယ်လစ်။ တစ်ပတ်ကျော်ကြာဆက်သွယ်မှုနှင့် Prause သည် Prause ၏ဂျာမန်ကွန်ဖရင့်သို့တက်ရောက်သည့်ကျွန်ုပ်၏ Prause ၏မိုက်မဲသော LAPD မှလွဲ၍ မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမျှမပြနိုင်ခဲ့ပါ။ Davison ၏ဖော်ထုတ်မှု ' အနှစ်တစ်ထောင် Post ကို 'နီကိုးလ် Prause အပေါ်ဖော်ထုတ်။ Diana Davison သည် Prause ၏သားကောင်အတုနှင့် Prause အားတရားစွဲဆိုသည့်အသရေဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ၆ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
Diana Davison ဗွီဒီယိုသည် Prause ၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြာရှည်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖြစ်အပျက်များကိုအချိတ်အဆက်တစ်ခုပေးခဲ့သည်7နှစ်ကမ်ပိန်း အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များ၊ VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော t သည်ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြပေးနေပါသည်သူ Diana Davison ဗီဒီယို (စွဲလမ်းမှုမှတ်ချက်ပေးသူကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်)
ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ပျော်နေသောအိတ်တစ်လုံး ၀ တ်ထားပြီးလက်ရှည်အင်္ကျီနှင့်လက်နက်ပါရှိသည့် Prause ၏ရယ်စရာကောင်းသောရဲသတင်းကို Davison ကလှောင်ပြောင်သည် (Prause ၏အစီရင်ခံစာတွင်ကျွန်ုပ်သည် LA ၌တွေ့မြင်ရကြောင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်သူမနောက်ဆုတ်နေသည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှမဆိုထားသည်ကိုသတိပြုပါ)
အခြားသက်သေအထောက်အထားများတင်ပြရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ Prause သည် Davison နှင့်ဆက်သွယ်မှုများရပ်စဲခဲ့သည်
တပတ်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းထောက် Megan Fox မှ PJ မီဒီယာ နီကိုးလ် Prause အကြောင်းအလားတူဆောင်းပါးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်: “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်”.
ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Betzler, Stroozas, တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်-ဟော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြားအီးမေးလ်ဖလှယ်မှု
ဂယ်ရီ Wilson နှင့် Betzler & Stroozas သို့မဟုတ် Wisconsin တက္ကသိုလ်မှကိုယ်စားလှယ်များအကြားဖလှယ်သည့်အီးမေးလ်များကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်။ သက်ဆိုင်ရာဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ မှတ်ချက်။ ။ Betzler & Stroozas သည်သူ၏အီးမေးလ်များကို David Ley နှင့် Nicole Prause သို့ပို့နေသည်ဟု Wilson ကသံသယရှိသည်။ ဒါကိုနောက်ဆုံးအီးမေးလ်နဲ့ David Ley ရဲ့အမျက်ဒေါသနဲ့တွစ်တာမှာအတည်ပြုခဲ့တယ် အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ဆောင်းပါးဖျက်ပစ်ခံ, ရှေ့မှာ လူအပေါင်းတို့သည်ပါတီများကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။
အယ်ဒီတာချုပ် Betzler နှင့် Wisconsin-Lacrosse တက္ကသိုလ်၏အကြံပေး၊ အဓိပတိနှင့်ဒု - အဓိပတိသို့ဂယ်ရီ Wilson ၏ကန ဦး အီးမေးလ် (မတ်လ ၁၇ ရက်တနင်္ဂနွေ)
မှ: ဂယ်ရီ Wilson
Sent: တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 17, 2019 3: 43 pm တွင်
ရန်: နောဧသည် Finco; Karley Betzler
cc: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; ဂျိုး Gow; ဘော့ Hetzel
subject: အဆိုပါ Raquet အတွက်အပိုဒ်ငါ့ကိုနာမည်မိစ္ဆာရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါရှိသည်
ပြန်လည်: အဆိုပါဘောလုံးရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေး: သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်
ငါမမှန်သောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ LAPD နှင့်ငါ့ကိုအကြောင်းကိုတင်သွင်းခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါအထက်ပါဆောင်းပါးထဲမှာဖတ်ရှုဖို့ထိတ်လန့်ခဲ့သည်။ ငါကတကယ်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သံသယစေသည်ရာထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာအကြောင်းဘာမှကိုကြားဖူးဘူး။ သငျသညျကဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုမဆိုသက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား အကြှနျုပျ၏မှန်းဆတဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သကဲ့သို့နီကိုးလ် Prause, ထိုကဲ့သို့သောဒီအဖြစ်အယူမှားအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းတီးဖို့လည်းလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်ပင် Prause ဤအစီရင်ခံစာ file လုပ်ခဲ့တယ်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, အထဲတွင်ဘာမျှမမှန်သည်။ ရဲထငျရှားအစီရင်ခံစာ (4-22-18 ရက်စွဲပါ) စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်မယုံကြ။ ငါဆက်ဆက်ကအကြောင်းဘာမျှမကြားရပြီ။
Prause နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ငါ့ကိုနှောင့်ယှက် (နှင့် Over-အသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြှင့်သူအများအပြားအခြားသူတွေ) လျက်ရှိသည်ကိုသတိထားပါပေးပါ။ သူမသည်ရဲမှအကြှနျုပျကိုသတင်းပို့နှင့် FBI ကအဖြစ်သူမကငါ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ "မ-အဆက်အသွယ်ယူမှု" ရှိကြောင်းဟုဆိုကာ၏မျိုးစုံမှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကြည့်ရှုပါ:
ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းကိုသာ Prause ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောအသေရေဖျက်လူမှုမီဒီယာကမ်ပိန်းကနေတစ်ဆင့်သူသိရာထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများကဒုက္ခရောက်နေငါအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့သော LAPD တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းတရားဝင်အထောက်အထားထောက်ပံ့မရှင်းပြခဲ့ပေမယ့်ငါနှင့်အတူစကားပြောထိုမိန်းမသည်အကျွန်ုပ်ကိုသနား ယူ. အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာတည်ရှိကြောင်းငါ့ကိုစိတ်ချပါ။ Prause ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာဤနောက်ဆုံးပေါ်အားထုတ်မှုအမှန်ပင်တင်သွင်းခဲ့လျှင်နောက်တဖန်, ငါသည်ယခုအားဖြင့် LAPD ကနေကြားရကြပြီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
သူတို့ကိုငါနှင့်အတူ check လုပ်ထားသောအခါ FBI ကပိုပြီးလာမည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အ FOIA တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်, သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာများကို FBI နှင့်ငါ့ကိုအကြောင်းကိုတင်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းငါ့ကိုစိတ်ချပါ။ ကြည့်ရှုပါ: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား.
ငါ Prause သွားရမည်သို့မဟုတ်သူမလက်ရှိရာကိုမဆိုညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သည်ဖူးဘူးအမျှဒီတရားဝင်အစီရင်ခံစာနိုင်ပါတယ်လမ်းမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ကြင်နာစွာသင့်ရဲ့ထုတ်ဝေထံမှအစီရင်ခံစာကိုဖယ်ရှား, ဒါကြောင့်ငါဥပဒေရေးရာအရေးယူရန်မလိုပါ။
သငျသညျအခြို့သောလေးနက်သောစုံစမ်းသတင်းစာပညာလုပ်ဖို့လိုပါလျှင်, သင်တို့ကိုငါအထက်ပါလင့်များနှင့်အတူစတင်အကြံပြုနှင့်လည်းဒီတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်: နီကိုးလ် Prause လွှမ်းမိုးမှုကို Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
co-စာရေးဆရာ Karley Betzler (UWL အလယ်ပိုင်းအချိန်ပေါ်သည်) ထိုနေ့ရက်တွင် replied
မှ: Karley Betzler
Sent: တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 17, 2019 3: 24 pm တွင်
ရန်: Gary Wilson
cc: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; ဂျိုး Gow; ဘော့ Hetzel; Samantha Stroozas
subject: Re: အဆိုပါ Raquet အတွက်အပိုဒ်ငါ့ကိုနာမည်မိစ္ဆာရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါရှိသည်
ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ရောက်ရှိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အထက်နီကိုးလ် Prause ထံမှလက်ခံရရှိသောအပြည့်အဝအစီရင်ခံစာပူးတွဲပါပွီ။
Wisconsin ပြည်နယ်-La Cross တက္ကသိုလ်
အဆိုပါဘောလုံးရိုက် - အယ်ဒီတာချုပ်
ဂယ်ရီ Wilson ကသူမကြာခင်နောက်ဆက်တွဲမယ်လို့တစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန့်တုန့်ပြန်နှင့်အတူဟုပြန်ပြောသည်:
Sent: တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 17, 2019 3: 51 pm တွင်
ရန်: Karley Betzler
ကျေးဇူးတင်ပါသည် Karley ။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ဆက်ဆက်စစ်မှန်သောလှပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စကိုစွပ်စွဲချက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် , အယူမှား ပင်ရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးမခံခဲ့ရပါ။ သို့သျောလညျးသူတို့နေဆဲသင့်ရဲ့စက္ကူပေါ်လာ။ ငါမကြာမီသင်တစ်ဦးထက်ပိုသောနှံ့နှံ့စပ်စပ်တုံ့ပြန်မှုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ ငါအစောပိုင်းကကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအလုပ်အကိုင်စာရွက်စာတမ်းများ (တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်) ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမျိုးစုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါပစ်ခတ်သော) ကြည့်ပါ - ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသရေဖျက်မှုအရေးဆိုမှု (မတ်လ, 2018).
တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ရှေ့နေများသည် Prause ၏မှားယွင်းမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ပါ ၀ င်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ Prause ၏စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရှေ့နေအက္ခရာများတင်ထားသည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Gary Wilson သည် Prause ၏ရှည်လျားသောနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကိုထပ်မံပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Prause သည် FBI အစီရင်ခံစာများတင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာရှည်လိမ်ညာခြင်းနှင့် Gra Wilson ၏ Prause တွင်သူတင်ပြခဲ့သော FBI အစီရင်ခံစာမိတ္တူများ -
Sent: တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 17, 2019 8: 40: 05 pm တွင်
ဒါဟာသင့်ရဲ့စက္ကူမှတ်ချက်ပေးရန်အထဲတွင်အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်မပါဘဲ, သင်ထိုကဲ့သို့သောအသေရေဖျက် item တခုကိုလက်ခံရရှိဘယ်သူကိုကနေလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးထက်ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်နေတယ်မပါဘဲ၎င်း၏အကြောင်းအရာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော, တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုတစ်ဦးကရဲအစီရင်ခံစာထုတ်ဝေရန်မယ်လို့နှောင့်ယှက်နေပါတယ်။ ငါအစီရင်ခံစာဖယ်ရှားပစ်ရန်ကိုသင်ချင်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာထဲတွင်စွပ်စွဲချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ (သင့်စက္ကူကထုတ်ဝေသည်အထိကျွန်မဘာမျှမကြားသိခဲ့သောခန့်), ဒီမှာငါ့အမှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ငါဒေါက်တာ Prause သွားရမည်ကြပြီမဟုတ်သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, LA ကအတွက်, တစ်ခုသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ဒါဟာဒေါက်တာ Prause ရဲ့နာမညျကိုအများအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုဂရုတစိုက်သူမ၏အသရေဖျက်မှုမှတ်တမ်းတင်ကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများနှင့်အခြားသူများနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ချိုးတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်, ငါ့ website တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပေါ်လာသောမှန်သည်။ သင်ဒေါက်တာ Prause ကနေ content တွေကို print ထုတ်သည့်အခါသင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံနေကြတယ်ဘယ်သူကိုပိုပြီးအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင်တနည်းကား, သူတို့ကိုကြည့်ရှိသည်။
သူမ၏ညညျးညူ (နှင့်ငါ့က်ဘ်ဆိုက်ကနေဖယ်ရှားလိုသည်) ပုံသူမ၏ tweets မဟုတ်ဘဲသူမ၏၏ဓာတ်ပုံများကို၏ screenshots များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးရင်နှင့်အတူဆက်စပ်ပျက်ဆီးဖို့အာရုံကိုမခေါ်သူကိုလူများ၏အန္တရာယ်ရှိနှောင့်ယှက်သူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှတ်တမ်းတင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပါဝင်သည်။ tweets များ၏ screenshots မူပိုင်ခွင့်ရယူနိုင်ပါသည်ပုံရိပ်တွေမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့် DMCA ယူ-Down တောင်းဆိုချက်များမှဘာသာရပ်မဟုတ် (အရာ သူမအကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ငါ၏အအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ) ။ အဲဒီအကြောင်းရဲကိုပြောပြရန်သူမ၏ခရီးစဉ်သည်ငါ့ကိုအံ့သြပါဘူး။ မဟုတ်သလိုသူတို့ကသူမ၏ baseless စွပ်စွဲချက်တွေအပေါ်ကိုတက်မလိုက်ငါ့ကိုအံ့သြပါဘူး။
ငါကိုငါဂျာမနီမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ခုတည်းသောညီလာခံဒေါက်တာ Prause စိတ်ဝင်စားပါပြီဘယ်တော့မှမယ်လို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်အပြုအမူစွဲအပေါ် nternational ညီလာခံ။ Prause မှန်မှန်ကြောင်းညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သည်သူအမျိုးအစားစွဲသုတေသနကျွမ်းကျင်သူများကအားဖြင့်သုတေသနမဆိုကိုးကားရန်ပျက်ကွက်တဲ့သူတစ်ဦး avid စွဲ-denier ဖြစ်ပါသည်။ သူမကဆိုပါတယ်သကဲ့သို့ငါအများပြည်သူအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဲ့သို့မတစ်ဦးတံခါးဝ-crasher အဖြစ်မှတ်ပုံတင်နှင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မဟုတ်သလိုကျွန်မလူသိရှင်ကြားငါ၏အတက်ရောက်သူကြေညာခဲ့ဘူး, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသူမကပင်ငါတက်ရောက်ခဲ့သည်ကိုသိပါ့မလား ငါ Prause တင်ပြခဲ့ပါသည်ဘယ်မှာမဆိုကွန်ဖရတက်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းဖူးဘူး။ မဟုတ်သလိုငါအလိုလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဘို့ငါစာရေးဆရာနှစ်ယောက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဘာသာရပ်အပေါ်စာတမ်းများနှင့်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံပညာအပေါ်တစ်ဦးအလွန်မှတ် Lay စာအုပ်၏စာရေးသူ, ဒါငါ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှပူးတွဲရေးသားသူဖြစ်ကြောင်းကို ထိုကဲ့သို့သောကွန်ဖရခဲလှ၏အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်ရန်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏စာအုပ်မိတ္တူချင်ပါတယ်လျှင်, ငါသည်သင်တဦးတည်းကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ADDICTA ။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက်
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ
Karley, ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများရန်သင့်စက္ကူရဲ့ဆောင်းပါးကဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု (ဆက်စပ်သောသုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုရည်မှတ်ကာစုံစမ်းအပိုင်းအစမဟုတ်ခဲ့: အဆိုပါပင်မသုတေသနစာမျက်နှာ) ။ အဲဒီမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးရင်၏အန္တရာယ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပေါများပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနင်နှင့်အမှန်ပင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
FTND မှငါ့ကိုမဆက်သွယ်ပြီးတော့, ငါ့ကို smearing နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် - မယ့်အစားသင့်ရဲ့ဂျာနယ်လစ်သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သိက္ခာချဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အ 11,000-စာမျက်နှာက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဆက်စပ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသန၏စာမကျြနှာပျေါမှာစာမကျြနှာမစဉ်းစားဘဲငါ့ကိုသိက္ခာချဖို့မသဘာဝကျပါတယ်: https://www.yourbrainonporn.com/။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကြောင်းသုတေသနဖို့လင့်များရှိရရှိနိုင်ကြောင့် FTND ငါ၏အ site ကိုဆက်စပ်ယူဆရမည်ဖြစ်သည်။
ငါ smearing ရဲအစီရင်ခံစာ, ငါ့အပေါ်ဆိုဖော်ပြထားခြင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကိုသင်ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ baseless နှင့်အန္တရာယ်ရှိ, ဒေါက်တာ Prause နှင့်သူမ၏လိုလားသူ porn လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြင့်စေ့စပ်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများ၏ရှည်လျားသောလိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (သားကောင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့နေစဉ်) ဒေါက်တာ Prause တခြားသူတွေရဲ့သူမ၏နှောင့်ယှက်ဘို့ထက်ပိုမို2နှစ်ပေါင်းစိတ်ပညာ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားဘုတ်အဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာခဲ့ကွောငျးသိရပေးပါ။ သင့်ရဲ့စက္ကူသူမ၏အသေရေဖျက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အတူသူမ၏ကူညီပေးနေခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။
ရဲနှင့် FBI ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အပေါ်ပို။
နှစ်ခုစာမျက်နှာများပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်, နီကိုးလ် Prause သူမသည် LAPD မှငါ့ကိုအစီရင်ခံကြောင်း 2013 ကတည်းကဟုဆိုကာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Prause (အရာကိုပြုလုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်တော့မှခဲ့သည်) ကို FBI ကမှသူမငါ့ကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်အဆများစွာ (နှင့်အခြားသူများကို) Tweet လုပ်ခဲ့သိရသည်။ စအဦး၌ Prause အပေါ် post မှအတု username များများစွာအလုပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးတွေအောက်မှာ။ Prause မရှိသလောက်သူမ၏အမည်ရင်းသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ကိုရွေးတော်မပြီးနောက်သမျှသောပြောင်းလဲသွားတယ်။
မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause သူမသည် FBI နှင့် LAPD မှငါ့ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် tweeting စတင်ခဲ့သည်။ ရုံငါ defaming အကြောင်းကို 500 Prause tweets များ၏ screenshots များသိရကြ၏။ ဒါဟာဆိုက်ဘာ-stalker သူသည် Prause ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမမှန်သောရဲတပ်ဖွဲ့ file မှ Prause အတိတ်ကြောင့်ထားကြပြီမဟုတ်ကြောင်းနှင့် FBI ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ငါ LAPD ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာကြောင်း 2016 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါသည်တနီကိုးလ် Prause ကရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါလျှင်, သို့မဟုတ်ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်မေးလျှင်ဖုန်းစကားပြောဆိုမှုအတွက်, သူတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမရှိကြ၏။ ဒီအပိုင်းအတွက်မှတ်တမ်းတင်သည်: ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Los Angeles မြို့ရဲဌာနနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့ Prause ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု
မှတ်ချက်: Prause ရဲအစီရင်ခံစာပြန် 2013 အပေါင်းတို့၌လမ်းတင်သွင်းရှိသည်ဟုအခိုင်အမာနေချိန်မှာသူမကတစ်ဦးဧပြီလ 2018 LAPD အစီရင်ခံစာအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအပ်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause5နှစ်ပေါင်းလဲလျောင်းခဲ့သညျ။ အဆိုပါ LAPD ရဲကိုအစီရင်ခံစာများကမျြးစာလာစာရွက်စာတမ်းများသည်မည်မဟုတ်နေစဉ်, FBI ကမည်။ အောက်တိုဘာလ, 2018 ၌ငါတစ်ခုတင်သွင်း FOIA တောင်းဆိုချက်အရ Prause အစဉ်အဆက်အကြှနျုပျကိုနာမည်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် FBI ကရှာဖွေအတူ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း FOIA သူမကဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ Tweet လုပ်ခဲ့ထားပြီးသော်လည်း, Prause တစ်ဦးကို FBI အစီရင်ခံစာတင်သွင်းဘယ်တော့မှမူကြောင်းကိုထင်ရှားနှင့် FTND Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဤတူညီသောပြောဆိုချက်ကို posted (ဤအပိုင်းကိုကြည့်ရှု မေလ 30, 2018: Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီအစီရင်ခံခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်).
ပြီးပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းများအဘို့, သင်သည်ငါ၏ FOIA တောင်းဆိုမှုကိုဒီမှာမုသာစကားကိုအဖြစ် Prause အတည်ပြု FBI ကရဲ့တုံ့ပြန်မှုများ၏ screenshots များကြည့်ရှုနိုင်သည် နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား။ ထို့အပြင် Prause က FF သို့ Alexander Alexander Rhodes ကိုအစီရင်ခံခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် သူ့အား Prause ၏စွပ်စွဲချက်များ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့် Alexander Rhodes သည်လွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခွင့်ကို FBI သို့တင်ပြခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသတင်းများကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ တနည်းကား, Prause လိမ်အဖြစ်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်၏ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ။ ဒီဇင်ဘာလ 2018: FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု.
ဖုန်းပေါ်မှာ FBI ကအေးဂျင့်မှပြောနေတာ၌ငါနီကိုးလ် Prause အပေါ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကို FBI အစီရင်ခံစာ file ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်ငါပြု၏။ Prause မိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ (အသေရေဖျက် tweets Screenshot စတာတွေကိုရန်၎င်း၏မရာဇဝတ်မှု) တင်သွင်းနေချိန်တွင်ရိုးရှင်းစွာထားပါ, ငါကို FBI နှင့် LAPD နှစ်ဦးစလုံးမှ Prause အစီရင်ခံရန်တစ်ဦးကို FBI အေးဂျင့်များကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်။ ငါ Prause စာမျက်နှာများပေါ်တွင်နေရာရှိသေးသောငါ၏ FBI ကအစီရင်ခံစာ, screenshots များတဲ့စီးရီးအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးစခရင်ပုံငါကို FBI မှမုသာစကားကိုအလေးအနက်ရာဇဝတ်မှုကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုငါ့လက်မှတ်ဖြစ်ပါသည်:
ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်သည်မှားယွင်းသော Prause“ ရဲအစီရင်ခံစာ” ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဖော်ပြချက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါဒီကိစ္စကိုအတွက်ဥပဒေရေးရာအကြံပေးရှာပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံး FTND hit-piece အများ၏အာဘော်နှင့်အယ်ဒီတာ, Samantha Stroozas စီမံခန့်ခွဲချက်ချင်းအားမရသဖြင့် replied နှင့်လက်တုန် အားလုံး3စာမကျြနှာ Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသည့် LAPD ရဲအစီရင်ခံစာ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးတွင် -
မှ: Samantha Stroozas[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]>
Sent: တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 17, 2019 7: 01 pm တွင်
ရန်: Gary Wilson; Karley Betzler
ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံပါ ၀ င်ရန်ဤဆောင်းပါးအားပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်၊ သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားနိုင်ငံရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန် The Racquet သည်အလုပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ဖော်ပြချက်ကိုသက်သေပြရန် ပို၍ အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနတွင်အထောက်အကူပြုသည့်လူသိရှင်ကြားအကဲဖြတ်သည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု၏ရဲတပ်ဖွဲ့ကဤအရာကိုဆောင်ရွက်သည်။ အကယ်၍ ဤပြသနာသည်စစ်မှန်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်မပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏နိုင်ငံရေးနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အထွေထွေအကြံပေးရုံးမှကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်ပါမည်။ ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သော်လည်း၊
Wisconsin ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် - La Crosse
ဆက်သွယ်ရေး, အင်္ဂလိပ် & အမျိုးသမီးလေ့လာရေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ဂယ်ရီ Wilson သည် Wisconsin တက္ကသိုလ်မှအဆင့်မြင့်အကြံပေးချက် ၃ ခုကိုတိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပို့သည်။ Wisconsin-Lacrosse တက္ကသိုလ်၏အကြံပေး၊ အဓိပတိနှင့်ဒု - အဓိပတိသည်ထပ်မံကူးယူထားပါသည်။ ကျောင်းသားအယ်ဒီတာများဖြစ်သည့် Betzler & Stroozas တို့ကို Wilson မှပေးပို့လိုက်သောနောက်ပိုင်းအီးမေးလ်များကိုချန်လှပ်ထားသည်။
Sent: Thursday, မတ်လ 20, 2019 11: 23 AM
ရန်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
subject: “ ရက်ကက်” တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခြေအမြစ်မရှိ၊
RE: Baseless, အသေရေဖျက်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအကြောင်းပြောရင် အဆိုပါဘောလုံးရိုက်
ဤသည်ကိုအီးမေးလ်, La Cross ရဲ့ကျောင်းကသတင်းစာ၌ထငျရှားတဲ့အလွန်အမင်းအသေရေဖျက်ဆောင်းပါးစိုးရိမ်, အဆိုပါဘောလုံးရိုက်: https://theracquet.org/5838/showcase/the-racquet-investigates-fight-the-new-drug/. ဤသည်မှာဆောင်းပါးတွင်အယ်ဒီတာများကကျေးဇူးတင်စွာပါ ၀ င်စွာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သောကျွန်ုပ်အကြောင်းကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှုမရှိ။ ရဲရင့်စွာတင်ပြထားသောရဲအစီရင်ခံစာအားဖယ်ရှားရန်နောက်ထပ်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (ဤအပိုင်းအစသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသစ်ကိုတိုက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်“ FTND” ကိုဝေဖန်သည့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်) လက်ရှိအီးမေးလ်အောက်ရှိအီးမေးလ်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါ။
ရှင်းပြအဖြစ် အဆိုပါဘောလုံးရိုက် နီကိုးလ် Prause: (အများကြီးအထောက်အကူစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ) အယ်ဒီတာများ, ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ (သူအပြည့်အဝအတွက်အယ်ဒီတာများကထောက်ပံ့) ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အခြားသောဆန့်ကျင်အလားတူတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာသူဟုလူသိများနှောင့်ယှက်ဖြစ်ပါသည် ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ UCLA မှသုတေသီသူ၏သံသယရှိသူ အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသော မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးအား6နှစ်ပေါင်းသူမကရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုပြီဟုဆိုကာခဲ့ပြီးအက်ဖ်ဘီအိုင်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ကတင်ပြထားပါတယ်။ (2017 အတွက်) ငါနောက်ဆုံးတော့သူမခဲ့သော LAPD နှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါ မရ, တကယ်တော့ဒါပြုသောအမှုနှင့်ထိုအချက်ကိုလူသိရှင်ကြားသူမကဤအစီရင်ခံစာတင်သွင်း။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးကတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြောပါတယ်သောဤရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ၏လေ့လာသင်ယူ နီးပါးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အကြာ, ငါက link တစ်ခုနှင့်အတူဒေါက်တာ Prause (အဖြစ်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဒေါက်တာ Ley) ကတနေ့နှစ်ကြိမ် Tweet လုပ်ခဲ့ခံရမြင်သောအခါ အဆိုပါဘောလုံးရိုက်။ ဤသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပင်၎င်း၏တည်ရှိမှုငါ့ကိုအသိပေးတိုးချဲ့မအဖြစ်ရသည်မှာ, ရဲမှန်မှန်ကန်ကန်, တခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အဖြစ်အစီရင်ခံစာကဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာပါရှိသည်အရာကိုတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်စာမေးပွဲကအမှန်တကယ်မဆိုတရားမဝင်အပြုအမူစွပ်စွဲပါဘူးဖော်ပြသည်, ဒါပေမယ့် Prause ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောသရေဖျက်မှု၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး (နှင့် "မ platform") furthering များ၏အန္တရာယ်ရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းကိုသာတင်သွင်းခဲ့ကြပုံပေါ်သည်။
အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ Prause ရဲ့စိတ်ရင်းနှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးစွန်းများအတွက်ယန် exploit ဖို့စိတ်အားထက်သန်တောင်းဆိုသည့်ကျယ်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ရှိနေသော်လည်း - အယ်ဒီတာများ, သို့သော်, ဒီရေဖျက်အစီရင်ခံစာတရားဝင်ကြောင်း၎င်းတို့၏အလွန်တဖက်သတ်ဆောင်းပါး၌ဆိုလို။ ဥပမာအားဖြင့်, Prause FBI ကငါ့ကိုအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်တင်သွင်း (စ) သူမရှိကြောင်းနှစ်ပေါင်းတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ တစ်ဦး FOIA တောင်းဆိုမှုကိုမှတဆင့်ကျွန်မမကြာသေးမီကဖြည့်စွက်လိမ်လည်မှုကို FBI အစီရင်ခံစာတွေပြစ်မှုဆိုင်ရာဂယက်ရိုက်မှုနိုင်အဖြစ်သူမ, ဒီလမ်းအတွက်အလွဲသုံးစားလုပ် FBI ကအရင်းမြစ်များမလျှောက်ဝံ့မမူကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြု။ ၏အလငျး၌ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အပိုင်းအစ, ငါသည်ယခုသူတို့၏အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်ပူဇော်သောအရာကိုကုစားအထဲကရှာတွေ့ဖို့ LAPD ရေးထားပြီ သူတို့၏ အရင်းမြစ်များ။
၏အယ်ဒီတာများ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် သူတို့မဟုတ်မမှန် Prause "နောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်" ၏ငါ့ကိုစွပ်စွဲအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သောအသေရေဖျက်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ, ထုတ်ဝြေခင်းမပြုမီ, ငါ့ comment ကိုမရှာခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကပုံဤအစီရင်ခံစာ merited မဆိုလမ်းအတွက်သော LAPD နှင့်အတူအတည်ပြုရန်မကြိုးစားအားထုတ်မှုစေပြီ။ ဆန့်ကျင်အဖြစ်သူတို့ကအစ, အအစီရင်ခံစာ၏ပုံရိပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဆောင်းပါး၌ငါ့မှန်ကန်သော input ကိုထည့်သွင်းရန်ငြင်းဆန်ရဲအစီရင်ခံစာအတုယုံကြည်ကြောင်းအစားခဲ့ရသည်ပါပြီ baseless နှင့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့။ သူတို့ကဒေါက်တာ Prause တသမတ်တည်းအဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ရှုတ်ချ (နှင့် "မပလက်ဖောင်း" ကိုကွိုးစား) မူကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထားများအနှစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမြှင့်သောသူသည်အမျိုးမျိုးသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများလျစ်လျူရှု။ တကယ်တော့, ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်ရန်အယ်ဒီတာများ '' တုန့်ပြန်သည့်အစီရင်ခံစာသုံးဦးစလုံးစာမကျြနှာထကျထားဖို့ဖြစ်တယ် (!), မူလကထုတ်ဝေခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာ၏စခရင်ပုံ၏အရပျ၌။
ငါသည်သူတို့၏ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးအပျေါမှာ commented ရှိရာရေတိုမှာတော့, Twitter.com ပေါ်မှာငါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထင်ရှားလိုလားသူ porn ရပ်တည်ချက်နှင့်ယခင်ဆက်သွယ်ရေးပေးထား အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အယ်ဒီတာများသရုပ်ဆောင်ခံရဖို့ပေါ်လာ နှင့် ညစ်ခြင်းနှင့်ရူးနှင့် မပါဘဲ အခြေခံသတင်းစာပညာစံချိန်စံညွှန်းများအာရုံစိုက်။ ငါဥပဒေရေးရာအကြံပေးသူများနှင့်ဆွေးနွေးနှင့်ဤသရေဖျက်မှုဖြေရှင်းရန်အားလုံးရရှိနိုင်ကုစားလိုက်ရန်ရည်ရွယ်ပါ၏။ ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဒီမလိုအပ်သောလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပေမယ့်လျှင်အစီရင်ခံစာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ငါ့ကိုဖျောပွထားသ, ချက်ချင်းဆောင်းပါးကနေဖယ်ရှားကြသည်မဟုတ်, ငါနည်းနည်းရှေးခယျြမှုရှိပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ်ပြောရလျှင်ဤသည်သည်ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အထွေထွေအကြံပေးသူများ၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်အတွက် Prause ကပြုလုပ်သည့်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ ကြည့်ပါ - ဂယ်ရီ Wilson ကတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ် (မတ်လ, 2018) မှပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသရေဖျက်မှုဆိုနေ.
ဖေဖော်ဝါရီလ7တွင်th အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အယ်ဒီတာ Samantha Stroozas တစ်ဦးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ FTND တိုက်ခိုက်ခြင်းထင် investigatory အပိုင်းအစ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အနည်းငယ်ထိရောက်သောအခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးရန် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ညွှန်းဆိုမှုဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်လက်ရှိအပိုင်းအစကဲ့သို့ဆောင်းပါးအများစုပါဝင်သည် ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှုများ။ တွစ်တာတွင်၊ Stroozas ၏ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်ဆောင်းပါးတွင်သူမသည်ဆောင်းပါး၏သုတေသနနှင့်သက်ဆိုင်သောတောင်းဆိုမှုများကိုပြင်ဆင်သည့်သိသိသာသာသုတေသနများပါသည့် tweets များစွာဖြင့်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ tweets: https://twitter.com/YourBrainOnPorn/status/1093585735381176320။ Stroozas နှင့်သူမ၏ coauthor ငါ၏အတွိသို့မဟုတ်ငါဖျောမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများများ၏ content ဖြေရှင်းရန်ငြင်းဆန်, ငါ့ကိုပိတ်ဆို့။ ဒါဟာတာဝန်ရှိသတင်းစာပညာကျင့်ဝတ်ထိုကဲ့သို့သောလိုက်ဖို့သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုဖို့ဆောင်းပါးဆုံးသို့မဟုတ် addending အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်အခြားသင်တန်းအကြံပြုကြစေခြင်းငှါ, ပေမယ့်, porn-related ပြဿနာများ၏တည်ရှိမှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသော၏သဘောအရဆိုလျှင်မိမိတို့၏ prerogative ကြီးအဖြစ် စွဲမော်ဒယ်။
မတ်လ 17 တွင်th, Stroozas နှင့် Betzler FTND အပေါ်သူတို့ရဲ့ဒုတိယ hit အပိုင်းအစထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ငါ FTND အားဖြင့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ငါ (လွတ်လပ်သောက်ဘ်ဆိုဒ်ကို runကြှနျုပျတို့ကိုစာမျက်နှာအကြောင်း) 11,000 စာမျက်နှာများ, သူတို့ထဲကအများစုဟာ abstraction နှင့်အမူအကျင့်စွဲအပေါ်သုတေသနပြုခြင်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းနှင့်အတူတဲ့သူတွေစမ်းသပ်မှုကနေယူ Self-အစီရင်ခံစာများ-ပြန်လည်သုံးသပ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်များထက်ပိုအတူ။ သိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးငြင်းခုံ furthering ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ငါ porn ပတ်သက်. sketchier သုတေသနအချို့ဝေဖန်အဖြစ်လိုလားသူ porn ထောက်ခံသူတွေကို / သုတေသီများဖွငျ့ unsubstantiated တောင်းဆိုမှုများ။ ငါသည်လည်းဖြစ်၏ စာရေးသူ or Co-စာရေးဆရာ အလွန်အမင်းမှတ်နှစ်ခု peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့်လူကြိုက်များ၏စာရေးဆရာများ၏ ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်စာအုပ်.
လုံးဝမရှင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်, အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အယ်ဒီတာများငါ့အကွောငျးအသေရေဖျက်သဘောထားမှတ်ချက်အပါအဝင်နှင့် Prause ရဲ့ baseless ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာမျိုးပွားခြင်းဖြင့် FTND သူတို့ရဲ့ဒုတိယ smear "တိုးမြှင့်" ။ ငါဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ၌ငါ့မလိုချင်တဲ့ tweets များအတွက်အန္တရာယ်ရှိလက်တုံ့ပြန်မှုထက်အခြား FTND အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်ငါ့ကိုပါဝင်သည်ရန်မစဉ်းစားဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်ပါ။
ကရှင်းပြသည်အဖြစ်ငါအခြေအမြစ်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူအပိုင်းအစကိုမြင်သောအခါ, Stroozas နှင့် Betzler (defaming ငါ့ကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏ Prause ရဲ့ရှည်လျားဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်သမိုင်း၏အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်ရရှိနိုင်ပါကအများဆုံး ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ), အပါအဝင်:
FBI ကအစီရင်ခံစာများ (နှင့် Non-တည်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး baseless တောင်းဆိုမှုများ၏နှစ်) နှင့် ပတ်သက်. Prause ရဲ့မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများ၏စာရွက်စာတမ်းများ,
အတုအယောင်၏ Prause ရဲ့အသေရေဖျက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ငါ့ကိုယ်ပိုင် FBI ကအစီရင်ခံစာ "FBI ကနှင့်အတူတင်သွင်းကြတောင်းဆိုမှုများ,"
Prause ၏အနှောင့်အယှက် (ကယ်ဆယ်ရေး) နှင့် ပတ်သက်၍ ကယ်လီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်
(မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချို့သောအသုံးပြုသူများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးရင်များ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုအများပြည်သူအကြောင်းကြားရန်ဝံ့သူမည်သူမဆိုပစ်မှတ်ထား) အခြားသူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပေါ်မျိုးစုံ Prause တိုက်ခိုက်မှု၏စာရွက်စာတမ်းများ။
Stroozas မှားယွင်းစွာ Prause ရဲ့ spurious ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ "လူသိရှင်ကြားဝင်ရောက်သတင်းအချက်အလက်" ကြောင်းဟုဆိုကာ, ငါ့ကိုရန်သူမ၏အီးမေးလ်ကတုန့်ပြန်မမှန်သောထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း:
"ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံပါ ၀ င်ရန်ဤဆောင်းပါးအားပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်၊ သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားနိုင်ငံရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန် The Racquet သည်အလုပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ဖော်ပြချက်ကိုသက်သေပြရန် ပို၍ အရေးကြီးပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာသည်အများပြည်သူသုံးအကဲဖြတ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနတွင်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်”
အဆိုပါ LPAD ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအများပြည်သူမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့အဲဒါကိုတင်သွင်းသူထက်အခြားလူထုမဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ယူရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ Prause အားဖြင့်အယ်ဒီတာများမှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အယ်ဒီတာများ Prause ရဲ့အခိုင်အမာအတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ဖို့ကျွန်မကိုမဆက်သွယ်ခဲ့ပါ။ သူတို့ (အခိုင်အမာကဲ့သို့) တကယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကို Google-ရှာဖွေရေး '' ဂယ်ရီ Wilson နဲ့နီကိုးလ် Prause 'ရန်နှောင့်အယှက်ခဲ့လျှင်, ထိပ်တန်းပြန်သုံးခုငါ့ကို Prause ရဲ့နှောင့်ယှက်မှတ်တမ်းတင်ကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများနှင့်အခြားသော (ပါပြီမယ်လို့1, 2, 3).
အဘယ်ကြောင့်အယ်ဒီတာများအင်တာဗျူးလွတ်လပ်သောသုတေသီများကသို့မဟုတ်စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ porn စွဲများနှင့်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်လော အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသာမဆိုတက္ကသိုလ်နှင့်အတူဆက်နွယ်ပညာရှင်များနှင့်မနေသောညစ်ညမ်း-စွဲ deniers စကားပြောခဲ့တာလဲ အဘယ်ကြောင့်ဤအအယ်ဒီတာများ porn ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အဆိုတော်နှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်သောသူ Prause, feature ဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပါ; တောင်းနှင့်ပုံ, အညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏စည်းရုံးတိုက်တွန်းလက်မောင်းကနေ "အကူအညီ" လက်ခံရရှိခဲ့သည် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (ဖြစ်နိုင်သည် FSC မှတဆင့်သူမ၏သုတေသနအချို့အဘို့အဘာသာရပ်များရယူအပါအဝင်); (တစ်ဦးသီးသန့်စက်မှုလုပ်ငန်း-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသာအဖြစ်အပျက်အပါအဝင်) porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ပြီး, နှင့် အများကြီးပို.
အဘယ်ကြောင့် Stroozas နှင့် Betzler Prause ရဲ့အများဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားစာတမ်းများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်လေ့လာမှုများ 16 ကြိမ်ထက်မနည်းဟာသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေများတွင်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့် critiqued ပြီလောသူတို့ရဲ့ဒါခေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိဘူး
သံမဏိ et al။ , 2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Prause et al။ , 2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Prause & Pfaus 2015 ။ ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD (2015) ကအယ်ဒီတာမှပေးစာ
ဒါဟာ Prause ကိုလည်းအတွက် featured ခံရဖို့သူမ၏မိတ်ဆွေများက / မဟာမိတ်များနှင့်အတူအယ်ဒီတာများရာနှစ်ဆယ်ကိုပုံ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ဆောင်းပါး။ အထူးသနီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley, နဲ့ Daniel Burgess မကြာခဏလူမှုမီဒီယာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ညစ်ညမ်းသံသယဝါဒီရဖျက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါအခြားသူတွေအကြား, အကြှနျုပျနှငျ့အ FTND အကြောင်းကိုအသေရေဖျက်မှတ်ချက်များ post အတူတကွအလုပ်လုပ်သုံးခုစလုံး၏စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်အယ်ဒီတာများကိုပထမဦးဆုံးသောအရပ်တွင်ဤအပိုငျးပိုငျးရေးသားဖို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ကြသလဲ သူတို့ဘာလို့ Prause ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးအကျယ်စာနယ်ဇင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ staffed နှင့်သူမ၏အာရုံ၏အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုအပြုသဘောစာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်ပျေါမှာရှိပုံပေါ်သလဲ? စဉ်းစားဖူး သူမသည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ Prause ဟုမေးဖူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုငါ့ site ရဲ့ URL နှင့်ငါ့စာအုပ်၏အမည်ကိုရန်ကြိုးစားနေငါ name အသုံးပြုခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်နီးပါး9နှစ်ပေါင်း? သူမမဟုတ်မမှန်အလွန်လေးနက်သောပြစ်မှုများနှင့်ပြစ်မှုနီးပါးတိုင်းကိုအဓိကညစ်ညမ်းသံသယဟုစွပ်စွဲထားပြီးအဘယ်ကြောင့်သူတို့က Prause ဟုမေးရှိပါသလား?
အဆိုပါအယ်ဒီတာများ FTND နှင့် Mormonism ရန်၎င်း၏ဆီကဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်ဆိုလျှင်, သူတို့က porn စက်မှုလုပ်ငန်းမှသူမ၏အလားအလာဆက်ဆံမှုအကြောင်းကို Prause မေးရန်အညီအမျှစိတ်အားထက်သန်ရှိသနည်း အဆိုပါအယ်ဒီတာများလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သူမအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားနေအဘယ်ကြောင့်သူတို့က Prause ဟုမေးပြီ သက်သေအထောက်အထားများ၏ screenshots များဆင်ဆာဖို့ DMCA ပညတ်တရား၏လိမ်လည်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း သူမ၏ tweets အကြောင်းကိုသူတို့ပေါ်လာရှိရာစာမကျြနှာသလော နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အဘယ်ကြောင့်ငါအကျုံး FTND အကြောင်းကိုဖြစ်လို့ယူဆတယ်ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ထည့်သွင်းနေပါတယ်?
တစ်ဦးထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်စုအဖြစ်-ဖြစ်ပါတယ်နီးပါးထုတ်ဝေဤဆောင်းပါးကိုဖြစ်နေဆဲပေးထားတွင်, ငါသည်သင်တို့၏တက္ကသိုလ်က၎င်း၏သတင်းစာပညာကျောင်းသားများကိုအမှန်တကယ်စုံစမ်းသတင်းစာပညာပို့ချ, ဒါပေမယ့်မျှသာအသရေဖျက်မှုထုတ်ဝေရန်ဖို့ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏မဟာမိတ်များများအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မပေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ဖို့ပေါ်လာစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ငါသည်ဤကျယ်ပြန့်စာရွက်စာတမ်းများပေးထားသည်အယ်ဒီတာများသင့်လျော်စွာအခြေခံသတင်းစာပညာအခြေခံမူအောက်ပါနှင့်တမင်တကာအသရေဖျက်မှုထုတ်ဝေနေစဉ်အထူးသဖြင့်အမြင်တွန်းအားပေးရန်အစားကြိုးစားနေ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါပြင်ဆင်ချက်စေခြင်းငှါမပါဝင်ခြင်းနှင့်များ၏သဘောအရဆိုလျှင်ဖယ်ထုတ်ပြီးမဆုံးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့ ကျွန်မလိုက်ဖို့ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကဆောင်းပါးဝေဖန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သည်တုံ့၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများ၏တည်ရှိမှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသောသုတေသန။
ငါတစ်ပါတ်အတွင်းဤစာတစ်တုံ့ပြန်မှုချင်ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်း, ငါသည်ဤအမှု၌အကြှနျုပျကိုကိုယ်စားပြုဥပဒေရေးရာအကြံပေးလေးလည်း၏ကနဦးခြေလှမ်းများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့မျှော်လင့် prompt ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဌာနအကြံပေး Lei Zhang ကထိုအဖြစ်အပျက်ကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြောင်း Wilson အားအကြောင်းကြားပြီးထိုနေ့တွင်ပင်ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် Prause ၏အခြေအမြစ်မရှိသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် Wilson အားမည်သည့်ဖော်ပြချက်မဆိုဖယ်ရှားပစ်သော်လည်းကျန်ဆောင်းပါးမှာမူဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ လိုင် Zhang ကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့“ ပို၍ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များသို့ဆက်သွားနိုင်မည်” ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းသတိပြုမိသည် - လူတစ် ဦး ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။
မှ: လဲ့ Zhang က <
Sent: Thursday, မတ်လ 20, 2019 3: 35 pm တွင်
cc: Vitaliano Figueroa; Samantha Stroozas; Karley Betzler; Betsy မော်ဂန်
ကျွန်မကျောင်းသားသတင်းစာများအတွက်ဒြေအကြံပေးဖြစ်ကြောင်းကို, အဆိုပါဘောလုံးရိုက်။ ငါနွေဦးချိုးစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်. ကြား၏။ ငါက်ဘ်ဆိုက်ကနေဇာတ်လမ်းဖယ်ရှားရန်အယ်ဒီတာများအကြံပြုခဲ့ကြသည်။
Wilson ကအောက်ပါအချက်များကိုနေ့, ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 21st ပြန်ကြား:
မှ: ဂယ်ရီ Wilson က <>
date: Friday, မတ်လ 21, 2019 မှာ 2: 58 pm တွင်
ရန်: လိုင် Zhang က <
subject: Re: ဘောလုံးရိုက်အပေါ်ထုတ်ဝေဇာတ်လမ်း
ဇာတ်လမ်းရှိကြောင်းကိုသင်သတိပြုမိ Are မဟုတ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုရေးသားခဲ့သည်အခါသင်ပုံယုံကြည်သည်အဖြစ်ဖယ်ရှားခဲ့? ကမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ကို defames ပေမယ့်ဒါဟာနေဆဲအတော်လေးအထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ်, ငါလူအများစုတစ် baseless, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေရန်အလွန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့သံသယ "အရေးကြီးသောကိစ္စ။ "
ဌာနအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လဲ့ Zhang ကလာမယ့်နေ့, သောကြာနေ့, မတ်လ 22nd အပေါ်ပြန်ကြား:
Sent: Thursday, မတ်လ 22, 2019 10: 06 AM
ကျောင်းသားသတင်းစာလွတ်လပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအယ်ဒီတာများရဲအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ပုံပြင်ထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းမဆိုပိုပြီးမှားယွင်းသောသို့မဟုတ်အသေရေဖျက်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်လျှင်ငါ့ကိုသိစေပါ။ အဆိုပါအယ်ဒီတာများအချက်အလက်များ၏ဤအမျိုးအစားကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာများဇာတ်လမ်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ ငါကထုတ်ဝေဖို့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူသဘောတူသည်။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုတတိယလူတစ်ဦးသောစကားသံ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဖော်ပြအမြင်များ, ဥပမာအားဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် UWL မှာစိတ်ပညာပါမောက္ခပိုင်တော်မူ၏။ သငျသညျဇာတ်လမ်းထဲမှာဖော်ပြအမြင်များနှင့်အတူသဘောမတူလျှင်, သင်ထားတဲ့အမြင်အပိုင်းအစအထောက်အကူပြုရန်ကြိုဆိုကြသည်။ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် မတူကွဲပြားသောအမြင်များကြိုဆိုသည်။
လဲ့ Zhang က, Ph.D ဘွဲ့ကို
ဂယ်ရီ Wilson ကထိုနေ့ရက်တွင်ပြန်ကြား:
Sent: Thursday, မတ်လ 22, 2019 3: 52 pm တွင်
ရန်: လဲ့ Zhang က
cc: Vitaliano Figueroa; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; ဂျိုး Gow; ဘော့ Hetzel; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ငါသည်သင်တို့ကိုက၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းကိုရည်မှတ်သင့်ရဲ့အယ်ဒီတာများ '' တောင်းဆိုမှုများများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကြောင်းကို The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ကိုဆက်သွယ်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင်နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ7နှစ်ဦးစလုံး, အစောပိုင်းကအီးမေးလ်များအတွက်ရက်ပိုင်းအဖြစ်th Stroozas ဆောင်းပါးချိုးဖောက်ဖို့ပေါ်လာ အဆိုပါဘောလုံးရိုက်မယ့် ယင်းအပေါ်ဖော်ပြထားအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ချက် အယ်ဒီတာစာမကျြနှာစာကို ( "အဆိုပါဘောလုံးရိုက် ဇာတ်လမ်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူပြဿနာများအားလုံးနှစ်ဖက်ဖြေရှင်းမပါဘူးဆိုရင်ထုတ်ဝေငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်") ။ တစ်ပြိုင်နက်လျစ်လျူရှုစဉ် Stroozas အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဆောင်းပါးများ, တဦးတည်းတဖက်သတ်နှင့်ကွောငျးထငျရှားသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ် (နှင့်အခြားသူများကို) သိက္ခာချဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြ သည့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထား preponderance အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးရင်၏အန္တရာယ်များကိုထူထောင်။
UW ငါ့တိုင်ကြားချက်များကထောက်ခံနေသည် Sroozas နဲ့ငါ့တွစ်တာလဲလှယ် ကျွန်မလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူသူမ၏မမှန်ကန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများတုရှိရာ။ ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနမှတုန့်ပြန်မှာတော့ Stroozas ငါ့ကိုပိတ်ဆို့ထို့နောက်မတ်လ 17 အတွက်လက်တုန်thတစ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာငါနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘယ်အရာမျှခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၌ဒေါက်တာ Prause ရဲ့အမှားကိုအမှန်မျိုးပွားခြင်းဖြင့် 2019 ဆောင်းပါး။
Stroozas နှင့် Betzler မတ်လ 17 အပေါ်အကြောင်းကြားကြသောအခါth ဒေါက်တာ Prause ၏ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ငါ့ကို libeling ၏ရှည်လျားပြီးမှတ်တမ်းတင်သမိုင်းနှင့် Prause ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာ၏မိစ္ဆာ, Stroozas spitefully အစီရင်ခံစာအားလုံး3စာမျက်နှာများကိုထုတ်ဝြေခင်း, တစ်စက္ကန့်အချိန်လက်တုန်။ CC ကိုရဲ့တက္ကသိုလ်အရာရှိများအားလုံးကိုအီးမေးလ်များကိုပေါ်နေသော်လည်း, အသေရေဖျက်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအွန်လိုင်းကျန်ရစ်4နေ့ရက်ကာလအဘို့။
အင်တာနက်ကိုအစဉ်အမြဲဖြစ်ပြီး, ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့်ဆက်စပ်စာသားကိုဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့အယ်ဒီတာများ (နေဆဲ) ကသူတို့အတွက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဆက်လက်သည့်သိက္ခာမဲ့ပြည်သူပြည်သားအချို့တို့ကနောက်ပိုင်းတွင်အသေရေဖျက်အသုံးပြုရန်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည် hit အပိုင်းပိုင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတွေက Wisconsin တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကငါ့ကိုမလျော်ကန်စွာရှုတ်ချပြီးသားဖြစ်နေပြီလို့ငါ့ကိုအာမခံပေးတယ်။ နောက်ခြေလှမ်းတွေကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားရ ဦး မယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၇ ရက်တွင်ကျောင်းသားအယ်ဒီတာကဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းကြေငြာလိုက်သည်။ ပရိုတိုကော Karley Beltzer cc ၏ Gary Wilson ၏ရှေ့နေများ၊ David Ley, Nicole Prause နှင့် Daniel Burgess (ရှေ့နေများနှင့်တက္ကသိုလ်အရာရှိများနှင့်အတူ)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့3/ 27 / 2019 2: 34 pm တွင်
သင်တို့ရှိသမျှသည်ကောင်းသောနေ့ရက်ကိုသင်ရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Sam Stroozas နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် အဆိုပါဘောလုံးရိုက်မယ့် က်ဘ်ဆိုက်။ ဤသည်ကိုအများအတွက်စံပြအခွအေနေမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ထောက်ခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်အဘယ်သူမျှမကအခြားရှေးခယျြမှုရှိခဲ့လျှင်အဖြစ်ကျနော်တို့ခံစားရတယ်။
ကျနော်တို့ UWL အများပြည်သူနှင့်ကျော်လွန်ပြီးတစ်ဦးလိုအပ်သောစကားပြောဆိုမှုပေးရနျကြှနျုပျတို့၏ကတိကဝတ်များကရပ်တယ်။ အဆိုပါဘောလုံးရိုက် အစဉ်အမြဲဒီအတွေ့အကြုံအားဖြင့်ပိုကောင်းဘို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Karley Betzler & ဆမ် Stroozas
အဆိုပါဘောလုံးရိုက် - Editor-in-Chief နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအယ်ဒီတာ
Betzler နှင့် Stroozas တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson ၏အီးမေးလ်များကို Nicole Prause နှင့် David Ley သို့ပို့ပေးနေသည်ဟူသောအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာဒေါက်တာ Ley သည်တစ် ဦး တည်းသောတုံ့ပြန်မှုဖြင့်အလျင်အမြန်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး Wilson အကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့3/ 27 / 2019 3: 44 pm တွင်
တကယ်ပါပဲ။ ငါ Wilson မှန်မှန်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အနိုင်ကျင့်နည်းဗျူဟာမှတဆင့်စာနယ်ဇင်းသမားများ intimidates သောသင်သတိပေးခဲ့သည်။
သူကသမ္မတကို run သင့်တယ်
အစောပိုင်းအီးမေးလ်များတွင် Prause နှင့် Ley တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Ley ၏ retort က Wilson ၏စာပေးစာယူကိုသတိထားမိကြောင်း (သို့မဟုတ် Ley ခေါ်သည့်အတိုင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်း) နှင့် အဆိုပါဘောလုံးရိုက် နှင့်၎င်း၏ပစ်မှတ်ထားသရေဖျက်မှုငြိမ်းရန်၎င်း၏အဆုံးစွန်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ပိုများသောပြောရာမှာအောက်ပါဖြစ်ပါတယ် unhinged tweet3နာရီတင်ခဲ့သည်ခဲ့သည် ရှေ့မှာ လူတိုင်းအတွက်နောက်ဆုံး Karley Betzler အီးမေးလ်
Prause နှင့် Ley တို့သည်မကြာခဏဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြပြီးသူတို့သဘောမတူသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်အသရေဖျက်ရန်သတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ley သည် Oregon တောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ Wilson ထုတ်ပယ်ခံရသည့်လိမ်ညာမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသရေဖျက်မှုနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Ley ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဤစာမျက်နှာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသရေဖျက်မှုအရေးဆိုမှု (မတ်လ, 2018).
လအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့ရှိသည် David Ley သည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဆန်သော porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster နှင့်ပူးပေါင်းသည်။